Thermomix को साथ साप्ताहिक मेनू - तपाइँको दैनिक खाना बनाउनुहोस् | ThermoRecines
कुनै पनि मद्दत स्वागत छ र अझ बढि यदि यो भान्साकोठामा कार्यको सुविधा दिनको बारेमा हो भने, हामीसँग दैनिक भोजनको तयारीको साथ। यस ठाउँ मा तपाईं मजा लिन सक्नुहुन्छ साप्ताहिक मेनू, जहाँ तपाईं प्रत्येक हप्ताको लागि रेसिपीहरूको तयारीको बारेमा उत्कृष्ट विचारहरूको आनन्द लिनुहुनेछ। जीवनलाई अधिक जटिल बनाएको बिना भान्छाकोठामा जीवन आयोजना गर्ने एउटा अनौंठो तरीका। व्यंजनहरु हप्ताको प्रत्येक दिनको लागि सामग्री, सुझावहरू र तयारीयस तरिकाले, भान्साकोठामा हाम्रो कार्य सुधार हुनेछ। त्यसोभए यदि तपाईले खोज्नु भएको कुरा तपाईको साप्ताहिक मेनूहरूको लागि विचार हो भने, तपाई उत्तम इन्क्लेभमा हुनुहुन्छ।
अर्को हप्ताको लंच र डिनरको लागि कुनै विचार छैन? २०२२ को हाम्रो मेनु हप्ता २१ मा हेर्नुहोस् र मजा लिनुहोस् स्वस्थ र सरल व्यञ्जनहरु मे 23 देखि 29 सम्मका दिनहरूका लागि।
यस मेनुको लागि हामीले सन्तुलित आहारको लागि सबै आवश्यक सामग्रीहरू र सधैं जस्तै, सरल व्यञ्जनहरू छनौट गरेका छौं। मौसमी उत्पादनहरूको फाइदा उठाउँदै।
यो मेनुमा केहि र कम पनि छैन फलफूलहरू। यस पटक हामीले तिनीहरूलाई तीन फरक रेसिपीहरूमा तयार गरेका छौं र कुनै पनि बोरिंग छैन: क्रीम, चना मसाला र एक हुमस।
चावल एक आधारभूत हो जुन हामी यसको बहुमुखी प्रतिभाको लागि माया गर्छौं। यो हप्ता हामीले तयारी गरेका छौं सलाद र गार्निशको रूपमा। वैसे, यदि तपाइँ सोमबार सलाद परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाइँ कुनै पनि संस्करण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन मैले तपाइँलाई यस संकलनमा छोडेको छु:
समुद्र तट र पोखरीमा लैजान १० भात सलाद
टेकवे राइस सलादको यो संग्रह आदर्श छ यदि तपाईं समुद्री किनारमा, पोखरी वा काममा खानको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने।
El माछा पनि धेरै उपस्थित छ। यस पटक हामीले यसलाई स्टीम गरेका छौं, जुन थर्मोमिक्सको साथ शानदार छ, र केकमा जुन धेरै सरल छ र जुन हामी अग्रिम बनाउन सक्छौं।
यसको अतिरिक्त, हामी प्रयोग गर्नेछौं झींगा वा झींगा सोमबार चामलको सलाद र आइतवारमा अचम्मको स्यान्डविच भर्नको लागि प्याट तयार गर्न।
को सब्जिहरु तिनीहरू एक अत्यावश्यक हुन् र मेनुमा उपस्थित छन्। तिनीहरूले हामीलाई व्यञ्जनहरूमा मुख्य सामग्रीको रूपमा वा अन्य तयारीहरूको लागि आधारको रूपमा सेवा गर्छन्। र तिनीहरू सधैं उपस्थित हुनुपर्छ।
लगाउनु संतुलित आहार हामीले काँचो तरकारीहरू पनि समावेश गर्नुपर्छ। अब जब यहाँ राम्रो मौसम छ, यो प्रत्येक खाना संग gazpachos र साधारण सलाद को बानी को लागी उपयुक्त समय हो।
सन्तुलित मेनुमा पनि समावेश गर्न सकिन्छ सानो whims जस्तै भरिएको focaccia वा gnocchi। यो अन्तिम पकवान एकदम क्यालोरी छ, त्यसैले हामी एक धेरै साधारण सलाद संग जान्छौं जसले हामीलाई हाम्रो मुख्य परिकारमा ताजा र हल्का स्पर्श दिन्छ।
के तपाईंलाई थाहा छ कि एकल परिकारहरूका लागि उत्कृष्ट छन् संगठित हुनुहोस् छिटो र सजिलै?
अद्वितीय व्यञ्जनहरू भाँडाहरू हुन् जुन आफैंमा हुन्छन् सरल र जटिल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, र बोसो।
यो हप्ता हामीले तयारी गरेका छौं2अद्वितीय परिकार यसले हामीलाई हप्तालाई थप आरामदायी बनाउन मद्दत गर्नेछ।
एकातिर हामीसँग छ काउस कस र च्याउले भरिएको औबर्गिन। यो नुस्खा बनाउन को लागी तपाइँ क्विनोआ को लागी कस कस को प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चामल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तर हामीले यसलाई अन्य रेसिपीहरूमा प्रयोग गरिसकेका छौं, त्यसैले यो फरक फरक हुन्छ।
अर्कोतर्फ चना मसाला वा चना करी कि हामीले चामलसँग मिलाएर राखेका छौं। यो एक धेरै पूर्ण शाकाहारी डिश हो जुन बारीकियोंले भरिएको छ।
अद्वितीय व्यंजनहरू उत्कृष्ट छन् किनभने तिनीहरू सामान्यतया सरल र छन् बाहिर खाँदा धेरै व्यावहारिक चाहे कार्यालयमा होस् वा बाहिर ।
२०२२ को मेनु हप्ता १०
अजवाइन र क्रीम चीज एपेटाइजर
रमाइलो एपेटाइजर जसमा सेलेरी स्प्रिगले कन्टेनरको रूपमा काम गर्दछ र घरको स्वादिष्ट पनीर क्रीम (गोर्गोनजोला र रीकोटा)
थर्मोमिक्स, हेम र ब्रोकोलीमा आमलेट
थर्मोमिक्समा ओमलेट बनाउनु, सरल हुनुको साथै, ग्यारेन्टी गरिएको सफलता हो। हामीले प्रस्ताव गरेको तरकारी, चीज, पकाएको ह्याम...
हेमको साथ लीकहरूको हल्का क्रीम
एक हल्का स्वाद र मलाईदार बनावटको साथ लीकहरू र आलुको यो हल्का क्रीम, वास्तवमै स्वादिष्ट हुन्छ। हामी यसको साथ केही हेमको टुक्राहरू, साना टुक्राको साथ गर्नेछौं।
बच्चाहरूको लागि wर्स्टेलको साथ बर्गर
पोर्क र wर्स्टेल सॉसेजको साथ बनाईएको स्वादयुक्त बर्गरहरू। तिनीहरू सलाद, आलु वा एक ह्यामबर्गर बनमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
नरमाइलो र खानेको लागि विचारहरू बाहिर हामी यो हक केक जस्तो केहि साधारण प्रस्ताव गर्दछौं जुन तपाइँका बच्चाहरूले मन पराउनेछन्।
कसरी तपाईं १ मिनेटमा बनाउन सक्नुहुनेछ एक मीठो, पौष्टिक तरकारी प्याट, थर्मोमिक्सको साथ दाल ह्युमसलाई कसरी तयार गर्ने सिक्नुहोस्। के तपाई यसलाई चलाउन चाहानुहुन्छ? प्रवेश!
सुन्दरिड टमाटर क्र्याकरहरू
सुक्खा टमाटरको नुनिलो क्र्याकरहरू राम्रो घरको पाटो फैलाउन वा मोन्टाटिटोको आधारको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यस लाइम सेन्टेड चिकन सूपको साथ तपाईंले १०० kcal भन्दा कम तातो र हल्का डिशको आनन्द लिनुहुनेछ। प्रति सेवा।
तपाईं स्वस्थ र प्रकाश व्यंजनहरु मन पराउनुहुन्छ? हामी तपाईंलाई समुद्री बास एन प्यापिलोट बनाउन सुझाव दिन्छौं। आफैलाई हेरचाह गर्ने एक चाखलाग्दो तरीका।
हामी तपाईंलाई कसरी थर्मामिक्सको साथ परम्परागत स्टूको तयारी गर्ने छनौट गर्दछौं जुन आजको खाना र भोजनमा अनुकूल छ।
टमाटर र मोज्राल्लाले भरिएको स्वादिष्ट घर बनाएको फोकासिया। उत्सवहरूको लागि वा साथीहरूसँग खाजा वा अनौपचारिक भोजनको लागि आदर्श। बच्चाहरूलाई यो धेरै मन पर्छ।
र याद गर्नुहोस् कि हरेक बिहिबार तपाईले फेला पार्नुहुनेछ तपाईको साप्ताहिक मेनु con लंच र डिनर तयार गर्न विभिन्न विचारहरू अर्को हप्ताको।
द्वारा मायरा फर्नांडीज जोग्लर बनाउँछ6दिन .
अर्को हप्ताको लंच र डिनरको लागि कुनै विचार छैन? हाम्रो मेनु हप्ता 21 मा एक नजर राख्नुहोस् ...
द्वारा मायरा फर्नांडीज जोग्लर बनाउँछ2हप्ता .
20 को हप्ता 2022 मेनु यहाँ छ। लंच र डिनर को लागी सजिलो विचारहरु को एक प्रस्ताव ...
द्वारा मायरा फर्नांडीज जोग्लर बनाउँछ3हप्ता .
हप्ता 19 को लागि मेनु प्रस्तावहरूले भरिएको छ त्यसैले तपाईं विचारहरू समाप्त हुनुहुन्न र तपाईं तयार गर्न सक्नुहुन्छ ...
10 सरल र स्वादिष्ट bechamel सॉस
द्वारा मायरा फर्नांडीज जोग्लर बनाउँछ4हप्ता .
तपाईंले आज हाम्रो प्रस्तावलाई माया गर्नुहुनेछ। यो 10 सरल र स्वादिष्ट bechamel सॉस संग संग्रह हो ...
हप्ता 18 को लागि मेनु2दिन देखि लन्च र डिनर संग तयार छ ...
द्वारा मायरा फर्नांडीज जोग्लर बनाउँछ १ महिना .
स्वादिष्ट व्यञ्जनहरू पकाउन तयार हुनुहुन्छ? 17 को लागि हप्ता 2022 मेनुले पछिल्लो हप्ताको लागि रेसिपीहरू ल्याउँछ ...
16 को मेनु 2022 को हप्ताको लागि लन्च र डिनर को लागी धेरै विचारहरु संग यहाँ छ ...
द्वारा मायरा फर्नांडीज जोग्लर बनाउँछ2महिना .
हप्ता 15 मेनु इस्टर को विशिष्ट स्वादहरु संग लोड छ। यो मेनु हो, मुख्यतया माछा, तरकारी,…
14 को हप्ता 2022 को लागि मेनुको साथ हामी अप्रिल महिनाको आगमन मनाउँछौं र हामी यो गर्छौं ...
यो मेनु 13 हप्ताको लागि हामी पूर्ण रूपमा मार्चको अन्तिम हप्तामा प्रवेश गर्छौं। केही रेसिपीहरु…
स्ट्रबेरी संग 10 उत्कृष्ट व्यञ्जनहरु
हामी वास्तवमै सबैभन्दा मनपर्ने सिजन आउन चाहन्थ्यौं र, यसलाई मनाउन हामीले स्ट्रबेरीसँग १० उत्कृष्ट रेसिपीहरू सँगै राखेका छौं...
शिशुहरूका लागि ट्रिपल प्यूरी